प्यापीलोट मा कुखुरा संग सिमी - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
सुरूवात34 मिनेट2 व्यक्ति400२ क्यालोरी
भेरोमामा पकाउने जहिले पनि सजिलो हुन्छ र यस नुस्खाको साथ सिमीका लागि चिकन एन प्यापिलोटको साथ हामी तपाईंलाई देखाउन जाँदैछौं। यसले हामीलाई पनि मद्दत गर्दछ समय र ऊर्जा बचत गर्नुहोस्।
तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि "एन प्यापिलोट" भनेको कागज वा एल्युमिनियमको बन्द प्याकेजहरूमा खाना पकाउनु हो। त्यसोभए उनीहरूको जुस हराउँदैन र खानामा एक छ स्वादिष्ट स्वाद.
यो प्रविधिको साथ हामीले तयार गरेका छौं सब्जिहरु y माछा। तर अब ए संग केहि अगाडि जान गरौं लेगम रेसिपी।
प्यापीलोट मा कुखुरा संग सिमी हामी जाँदै छौं भेरोमामा गर्नुहोस्। यस तरिकाले, हामी यो नुस्खा बनाउनको लागि हाम्रो मनपर्ने क्रीम वा सूपको गिलासमा तयारीको फाइदा लिनेछौं। यसैले उहि समयमा र उही उर्जासँग हामीसँग २ रेसिपीहरू हुनेछन्।
1 पिन ईन् पिपिलोटको साथ
यो नुस्खाको साथ हामी हाम्रो Thermomix को सक्दो फाइदा लिनेछौं।
पालक को g 25 g
१ हड्डी रहित कुखुराको स्तन
थाइम र ओरेगानो
हामीले पिलिएको प्याज, लसुनको लौंग र धोइएका र पानी निकालिएकी शीशामा राख्यौं। हामी प्रोग्राम Seconds० सेकेन्ड, गति 5। हामी जाँच गर्छौं कि सामग्री राम्रोसँग काटिएको छ।
हामी सिमीहरू पखाल्दछौं जब सम्म उनीहरूसँग फोम हुँदैन। हामी तिनीहरूलाई राम्रोसँग निकाल्न दिन्छौं।
हामीले कुखुराको छातीलाई stri स्ट्रिप र प्रत्येक स्ट्रिपलाई pieces टुक्रामा काट्यौं। यो हामीसँग मध्यम आकारका टुक्राहरू हुनेछन्। हामी उनीहरूको स्वाद लिन्छौं।
हामीले ठूला एल्युमिनियम फॉइलका तीन पानाहरू काट्यौं। हामी ती दुई मध्ये एकलाई अर्कोको शीर्षमा रहेको भेरोमा ट्रेमा राख्छौं। हामीले किनारहरूलाई माथि उठाउछौं ताकि जब सामग्रीहरू थप्दा, तिनीहरू सर्दैनन्।
हामी केन्द्रमा सुक्खा बीन वितरण गर्दछौं। हामी शीर्ष मा कुखुरा टुक्रा वितरण। हामी काटिएको पालक र प्याज थप्छौं जुन हामीले गिलासमा राख्दछौं। हामी सेतो दाखमद्य र जैतुनको तेलले पानी दिन्छौं। हामी नुन र मरिच समायोजन गर्दछौं र थाइम र ओरेगानो छर्काएर समाप्त गर्दछौं।
हामी अन्य कागजहरू अन्य एल्युमिनियम शीटको साथ बन्द गर्छौं। यो धेरै सजिलो छ, हामीले केवल पाना सामग्रीको शीर्षमा राख्नु पर्छ। हामी माथिल्लो पानाको साथ तल्लो पानाको किनारहरूमा सम्मिलित हुन्छौं। र हामी त्यसलाई पट्छौं कि कागज बन्द रहन्छ।
हाम्रो प्यापिलोट पकाउन हामीसँग धेरै विकल्पहरू छन्:
एक गिलासमा liter मिनेट, भेरोमा तापमान, वेग १ लिटर पानी तताउनुहोस्। जब पानी तातो छ, तब भेरोमालाई उसको स्थिति र कार्यक्रममा राख्नुहोस्। Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
हामी गिलासमा अर्को रेसिपी बनाउँदा स्टीमको फाइदा लिनुहोस् जस्तै क्रीम, सूप वा कुनै अन्य तयारी जसमा cooking० मिनेट भन्दा धेरै खाना पकाउने समय हुन्छ।
थप जानकारी - रायोको भिनाग्रेटको साथ उमालेको तरकारीहरू / साल्मन प्यापिलोटे तरकारीहरूसँग
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सजिलो, तरकारीहरू, वरोमा रेसिपीहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » वरोमा रेसिपीहरू » पिन ईन् पिपिलोटको साथ
Dwarf महिला भन्यो
के नुस्खा समाप्त भयो? के खाना पकाउने समय भेरोमामा हराइरहेको छैन? खाना पकाउने समय संकेतहरूबाट, म कल्पना गर्दछु यो minutes० मिनेट, भेरोमा, स्पीड १ हो, तर नुमाइ अलि अचानक समाप्त हुन्छ।
Dwarf Lady लाई जवाफ दिनुहोस्
मुद्दा अब समाधान भयो ... हामीले पछिल्लो अपडेटको साथमा छुटायौं।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि नुस्खा समाप्त गर्नका लागि दुई तरिकाहरू छन्। कुनै श doubt्का बिना, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं अर्को रेसिपी बनाउन गिलासको प्रयोग गर्नुहोस् र यसरी समय र शक्तिको फाइदा लिनुहोस्।